युगसम्बाद साप्ताहिक - बहुमत प्रतिनिधि नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा
Wednesday, 01.29.2020, 01:20am (GMT+5.5) Home Contact
बहुमत प्रतिनिधि नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा
Wednesday, 07.02.2014, 11:52am (GMT+5.5)
- गोकुल बाँस्कोटा, युवा नेता, नेकपा एमाले
एमालेको नवौँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोटको काम सम्पन्न भएको छ । प्रतिनिधि छनोटसँगै एमालेको नवौँ महाधिवेशनलाई कसरी आँकलन गर्नुभएको छ ?
महाधिवेशन मुख्य गरेर दुई ओटा कुराका लागि हुन्छ । पहिलो कुरा भनेको नीति हो । त्यहाँ नीति कार्यक्रम र सिद्धान्तका बारेमा छलफल हुन्छ । दोस्रो भनेको नेतृत्व छनोटको विषय हो । यसरी हेर्दा महाधिवेशन नीति र नेतृत्वको विषयमा केन्द्रित हुन्छ । नेकपा एमालेको महाधिवेशन एमालेलाई मात्र ‘गाइड’ गर्ने गरी हुँदैन । एमालेको महाधिवेशन १२ औँ शताव्दीको नयाँ नेपाल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रमा कस्तो बनाउँने भन्नेमा पनि केन्द्रित हुन्छ । लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढिकरण र मुलुकको संवृद्धिका विषयमा पनि केन्द्रित हुने छ ।
प्रतिनिधि छनोटसँगै संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दुवै समुहले आ–आफ्नो पक्षमा दुई तिहाई मत रहको दाबी गरेका छन् । तपाईको बुझाइमा के छ ?
म दुई तिहाइको संभावना देख्दिन । तर, निर्वाचनको मैदानमा उत्रिँदा विपक्षीलाई कमजोर र आफू बलियो देखाउन पनि यस्ता खालका तर्क आउने गर्छन् । म पत्रकारिता गरेर राजनीतिमा प्रवेश गरेको व्यक्ति भएकाले सत्य र तथ्यमा आधारित कुरा बोल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी मैले सत्य र तथ्यमा आधारित भएर भन्दा केपी शर्मा ओलीको पक्षमा दुई तिहाईको नजिक मत आउने निश्चित छ । प्रतिनिधि छनोटले पनि के देखाउँछ भने नेता ओलीको पक्षमा ६० देखि ६३ प्रतिशत मत आउँछ । वरिष्ठ नेता नेपाल अध्यक्ष पदमा लड्नु भयो भने उहाँले ३३ देखि ३७ प्रतिशत मल ल्याउनु हुन्छ ।
केपी शर्मा ओलीलाई नै अध्यक्ष बनाउनुपर्ने कारण चाहिं के–के छन् ?
अहिले म नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा छु । म मात्र होइन अहिले छनोट भएर आएका ६० देखि ६३ प्रतिशत प्रतिनिधि पनि नेतृत्व हस्तान्तरणकै पक्षमा रहनु भएको छ । नेतृत्व हस्तान्तरण भनेको लोकतन्त्रको अधिकतम नमूना पनि हो । व्यक्ति जतिसुकै सक्षम भए पनि खास समयमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नै पर्नेहुन्छ । नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिनका लागि पनि नेतृत्व हस्तान्तरण आवश्यक छ । नेतृत्व घट्ट घुमेजस्तो घुमिरहने हो भने त्यहाँ सुस्तता, गतिहीनता र अकर्मयता देखिन्छ । त्यसले पार्टीलाई गति पनि दिन सक्दैन । त्यसैले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेतृत्व हस्तान्तरणको यस्तो अभियानमा भाँजो हाल्ने काम गर्नु गलत छ । यसले उहाँको हाइट घट्छ । त्यसैले उहाँले उम्मेदवारी नदिनु नै सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्ने रहर गर्नसक्नु हुन्छ । तर, उहाँले जित्ने कुनै पनि संभावना छैन । नीतिका हिसावले नेता ओलीले वोकेको विचार अहिले पार्टीले बोकेर हिँडेको छ । अवसरका हिसावले भन्ने हो भने अहिलेसम्म पनि उहाँले पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छैन । जनताको बहुदलीय जनवादलाई संवृद्ध गर्ने सन्र्दभमा होस या पार्टी भित्रको लोकतान्त्रिकरणको मुद्दा होस ।
यी दुवै विषय नेता ओलीको विचार हो । त्यसैले आगामी नवौँ महाधिवेशनबाट ओली एमाले अध्यक्ष बन्नुको अर्को विकल्प छैन । आठौँ महाधिवेशनको कुरा गर्ने हो भने उहाँले ल्याएको विचार पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको मुद्धा स्थापित भयो । तर, उहाँ अध्यक्ष बन्न सक्नु भएन । त्यति मात्र होइन ओली झापा आन्दोलनको पनि नायक हो । १४ वर्ष वढी जेलमा वसेर पनि पार्टीलाई गति र उर्जा दिने कुरामा उहाँको कहिल्यै कमी आएको छैन । हरेक ठाउँमा माधवकुमार नेपाललाई सहयोग गर्ने मामिलामा ओलीले कहिल्यै कन्जुस्याई गर्नुभएको छैन । तर, त्यही भूमिका नेपालबाट हुन सकेको छैन । यसरी हरेक कुराबाट हेर्ने हो भने अध्यक्षका लागि नेपालभन्दा ओली धेरै उत्तम हुनुहुन्छ । त्यही भएर हामी अहिले पनि भनिरहेका छौँ– माधवकुमार नेपालले नेता ओलीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । तर, उहाँको छाति कत्रो छ । त्यसमा भर पर्छ । उहाँको छाती भँगेराको जत्रो छ कि विशाल छ भन्ने कुरा पनि त्यसैले निर्धारण गर्छ । हामीले उहाँ पार्टीको प्रमुख र प्रधानमन्त्री भएको देखिसकेका छौँ । उहाँले पार्टीबाट लिन केही बाँकी छैन । त्यसैले उहाँले नेता ओलीलाई सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्ष बनाउन भूमिका खेल्नु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो ।
तर, नेपाल समूहले ओलीलाई नेतृत्व दिंदा नेतृत्व हस्तान्तरण होइन बुढा नेतामै नेतृत्व घुमिरहन्छ भन्ने तर्क गरेका छन् नि त ?
जुन व्यक्तिले तीन–तीन पटक पार्टीको नेतृत्व गरेका छन् । ती व्यक्तिले फेरि पनि मलाई नै नेतृत्व चाहियो भन्दै हिंडेका छन् । उनैले नेतृत्व हस्तान्तरण होइन पुस्तास्तरणको गीत गाउँदै हिडेका छन् । यस्तो र्याइर्याईको कुनै तुक छैन । यस्तो र्याइर्याइ बन्द गर्नुपर्छ । यो २१ औँ शताब्दी हो । पहिलाको जस्तो एक्लै डण्डा घुमाएर सत्ता चलाए जस्तो जमाना अहिले छैन् । आफुलाई देखाउँदा क्रान्तिकारी देखाउने र काम प्रतिगामी गर्ने कुराले हुँदैन ।
म उहाँलाई चुनौति दिन चाहन्छु । उहाँ शंकर पोखरेल कि घनश्याम भुषाल को अध्यक्ष भनेर प्रस्ताव ल्याउन सक्नुहुन्छ । म दावाका साथ भन्छु उहाँले त्यो प्रस्ताव ल्याउने आँट गर्नसक्नु हुन्न । उहाँको कुराको कुनै ठेगान छैन । उहाँ अडान विनाको नेता हो । उग्रवामपन्थलाई सिध्याउन केपी ओली चाहिने । नेपाललाई पार्टी प्रमुख वा प्रधानमन्त्री बनाउन पनि ओली चाहिने । दक्षिणपन्थीहरुसँग लड्न पनि ओली नै चाहिने । तर, ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन चाँही नहुने यो कुन तर्क हो ? यस्तो मनोरोगी मानसिकता यसपटक भत्किन्छ । यो आठौँ महाधिवेशन होइन । यो नवौँ महाधिवेशन हो । त्यसैले ओलीले हार्नुहुन्छ र नेपालले जित्नुहुन्छ भन्ने दिउँसै सपना कसैले पनि नदेखे हुन्छ ।
पछिल्लो समय वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका पक्षमा मोदी लहर आयो भन्ने चर्चा नेपाल समूहले गरेका छन् । साँच्चै हो ?
नेता नेपाल आफंै म पार्टी चलाउन सक्दिन भनेर राजिनामा दिएर भागेर हिड्नु भएको हो । उहाँलाई कसैले पनि गलहत्याएको होइन । पछि केपी ओलीले नै उहाँलाई पार्टीमा टिकाएको हो । जहाँसम्म मोदी लहरको कुरा छ । अहिले एमालेको नवौँ महाधिवेशन भारतमा होइन नेपालमा हुँदैछ । भारतीय जनता पार्टी जस्तो दक्षिणपन्थी पार्टीको चुनाव पनि यो होइन । एमाले जस्तो क्रान्तिकारी पार्टीको चुनाव हो यो । उहाँहरुले मोदी लहर आएको महसुस गर्नु भएछ । हामीले ओली लहर आएको अनुभूति गरेका छौँ ।
तपाईको केन्द्रीय सदस्यको दाबी के–का लागि ?
मैले तीन पटक काभ्रे जिल्लाको पार्टीको नेतृत्व गरेको छु । मैले नेतृत्व गरेपछि काभ्रेको पार्टीलाई बलियो बनाएको छु । त्यो मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन । मैले पार्टीमा गरेको योगदानको पनि कदर होस् भनेर केन्द्रीय सदस्यको दाबी गरेको हुँ । मैले कसैको दया–मायामा दाबी गरेको होइन । पार्टीलाई गतिशील र सुदृढ बनाउनका लागि पनि केन्द्रीय सदस्यमा मेरो दाबी हो ।